Waaheen Media Group » Caqabadaha hor-taagan in Dumarku helaan qoondo doorasho & Xalka ugu Haboon
Browse:Home Articles Caqabadaha hor-taagan in Dumarku helaan qoondo doorasho & Xalka ugu Haboon
Caqabadaha hor-taagan in Dumarku helaan qoondo doorasho & Xalka ugu Haboon
Published by Waaheen Media on May 2, 2017 | Comments Off on Caqabadaha hor-taagan in Dumarku helaan qoondo doorasho & Xalka ugu Haboon
Caqabadaha hor-taagan in Dumarku helaan qoondo doorasho &amp; Xalka ugu Haboon
Laga soo bilaabo sannadkii 2005-tii oo ahayd markii ugu horeysay ee ay haween si toosa ah ugu
tartamaan doorashadii golaha wakiilada waxa isa soo taraayay u xusul duubnaanta haweenka ee
ku saabsan sidii ay u heli lahaayeen in doorashooyinka goleyaasha wakiilada iyo ta goleyaasha
degaanka kuraas looga qoondeeyo dumarka. Doorashadaas waxa cod tartan ah ku soo baxday hal
xildhibaan oo la odhan jiray Ikraan Xaaji Daa’uud oo ku soo baxday doorasho toos ah.
Taasi waxay keentay in haweenku ay ka baqaan tartan toos ah oo ay u galaan kuraasta, waxaanay
bilaabeen ololeyaal ay ku doonayaan in la siiyo qoondo, aan cid kula tartamin.
Waa Maxay Qoondo Ama Kooto?
Waa saamiga loo xidho dadka aan tartami karin doorashooyinka xorta ah, waxay noqon kartaa
tiro kuraasi ah ama liiska murashaxiinta oo laga siiyo qayb gaar ah dad gaar ah sida haweenka.
Taasaa la yidhaa kootada ama qoondaynta haweenka.
Kootada ama qoondaynta la Siiyo Haweenku waa sadex nooc oo kala Ah:-
1. Waa in dumarka si gaar ah loo siiyo kuraas aanay u tartamin afka qalaadna waxa la
yidhaa (Reserved seats). Qaabkan dalalka adeegsadaa waxay inta badan dastuuradooda
iyo xeerarka ka farcama ku darsadeen xeerar sharci ka dhigaya in dumarku la siiyo
2. Waa in qoondo laga siiyo liiska musharixiinta kuraasta doorashada golaha wakiilada iyo
ta golaha deegaanka.
3. Waa in xisbiyadu liiska musharixiintooda ku daraan oo ay kuraas cayiman uga
qoondeeyaan kuraasta doorashada goleyaasha wakiilada iyo deegaanka afka qalaadka ku
noqonaysa (Voluntary Political Party Quotas). Habkan sadexaad waxa uu kaga gadisan
yahay badaas nooc ee hore, ma jiro sharci ama xeer jidaynaya ee waa inta ay xisbiyada
siyaasaddu u gartaan qoondada ay siinayaan dumarka.
In badan haweenka Somaliland waxay dadaaal u galeen in ay saami ka helaan kuraasta
doorashada iyo ka qayb-galka siyaasadda dalka.
Markii ugu horaysay ee ay haweenka Somaliland soo bandhigaan doonistooda la xidhiidha in
saami laga siiyo doorshooyinka kuraasta golaha wakiilada iyo deegaanka, waxay ahayd
sannadkii 2007, kadib markii ay ku hungoobeen haween badan oo isku soo sharaxay tartankii
doorashada ee golaha wakiilada.
Dumarku doonista saamigoodaas waxay ku sabayeen in aanay si toos ah ama tartan ah aanay uga
qayb qaadan karin doorashooyinka, isla markaana aanay ku guulaysan karin kuraas.
Wadamada ugu badan ee isticmaala qoondaynta Dumarka
Inkasta oo wadamadani aanay muslim ahayn haddana waa kuwa ugu badan ee dumarka siiya
qoondo doorasho. Qoondaynta dumarka oo afka qalaad lagu yidhaa (Gender Quota), waa qaabka
ugu badan ee wadamadu dunidu adeegsadaan. Wadamadu aad bay ugu kala duwan yihiin.
Wadamada ugu badan ee adeegsadaana waa kuwa loo yaqaan iskaandaneefiyaanka
(Scandinavians), oo ay ka mid yihiin:
Sweden, Norway, Finland, Denmark iyo kuwo kale.
Halka ay ka taagan yihiin goleyaasha sharci dajintu qoondada Haweenka
Golaha wakiilada ayaa markii la horkeenay qodobo ka mida xeerka doorshada golaha wakiilada
oo ay ku jiraan in saami la siiyo dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay, golaha wakiiladu
waxay u qaadeen cod gacan taag ah, waana ay diideen in ay ansixiyaan.
Fadhigaas oo qabsoomay 2 September 2012, oo uu shir guddoominayay gudoomiye ku-xigeenka
koowaad ee golaha wakiiladda Somaliland Baashe Maxamed Faarax waxa ka soo xaadiray 42
xildhibaan oo ka mida 82-ka uu golaha wakiiladu ka kooban yahay.
Cod qaadis kaddib waxa ogolaaday in la laalo ama aan la ansixin 21 xildhibaan, waxaa diiday 12
xildhibaan, halka ay 9 xildhibaana ka aamuseen, iyadoo aanu gudoomiyuhuna codayn.
Sidaasna waxa golaha wakiiladu ku laaleen qodobkii ku saabsanaa qoondada haweenka iyo
dadka laga tirade badan yahay ee ku jiray xeerka doorashada golaha wakiilada.
Sidoo kale in haweenka qoondo laga siiyo doorashooyinka waxa aan waafaqsanayn golaha
guurtida oo ka soo horjeestay qorshan qoondada haweenka. Golaha guurtidu waxay sheegeen in
arrintaasi ka hor imanayso dastuurka Somaliland iyo xeerarka ka farxamay.
Guurtidu diidmadoodaas waxay u cuskadeen qodobka 80-aad ee dastuurka Somaliland, kaas oo
sheegaya xaqa doorashada muwaadiniintu rag iyo dumarba ay u siman yihiin, cid gaar ahna aan
loo qoondayn karin wax u gaar ah.
Qodobkan dastuurka ayaa waxa uu u dhigan yahay sidan:- Qodobkiisa 8-daad, farqadiisa 1aad oo
ka hadlaysa sinaanta muwaadiniinta ee sharciga hortiisa ayaa waxay odhanaysaa muwaadiniintu
(rag iyo dumarba) ay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad isku mid ah, iyadoon
loo eegayn midab, qabiil, sinji, dhalasho IWM. Dastuurku rag iyo dumar wuxuu siinayaa
xuquuq siman oo waxay wadaagaan ereyga “Muwaadin”.
Waxa kale oo golaha guurtidu cuskadeen qodobka qodobka 22-aad farqadiisa 1-aad ee dastuurka
Somaliland, kaas oo ka hadlaaya xuquuqda siyaasadeed ee muwaadinka, qodobkaasi waxa uu u
dhigan yahay sidan:- “Muwaadin kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka qaybqaato arrimaha
siyaasadda, dhaqaalaha, bushada iyo dhaqanka ba si waaafaqsan shuruucda dalka iyo
Guurtidu waxay ku doodayaan in haweenku ay si toos ah uga qayb-qaataan tartanka
doorashooyinka ee kuraasta goleyaasha deegaanka iyo wakiilada.
Dumarku tirada dadka codeeya waxa lagu qiyaasaa 50%, haddana awood uma laha in ay iyagu
iskood isku doortaan oo ay kuraas ka helaan doorashooyinka goleyaasha deegaanka iyo
wakiilada, maadaama oo ay haystaan caqabado dhaqan iyo qaar siyaasadeed. Sidaa waxa
sheegtay Nafisa Yuusuf Maxamed oo ah agaasimaha isku xidhka daladda ururada haweenka ee
Caqabadaha dumarka ka haysta in dumarku si toos ah ugu tartamaan kuraasta goleyaasha dalka
waxa kale oo iyana caqabad ku ah iyaga qudhooda oo aan inta badan taageero isku muujin xiliga
doorashooyinka, sida ay sheegtay xildhibaan Baar Siciid Faarax oo ah haweenayda kaliya ee ku
jirta golaha wakiilada oo ka kooban 82 xildhibaan.
Xisbiyada Somaliland ayaa waxay ogolaadeen in saami laga siiyo dhan 10%, taas oo ah in
haweenku 8 xildhibaan ku yeeshaan 82-ka xildhibaan ee golaha wakiilada Somaliland. Sidaa
waxa sheegay Maxamed Cawaale oo ah agaasimaha waaxda xidhiidhka ee wasaaradda shaqada
iyo arrimaha bulshada Somaliland.
Dastuurka Somaliland iyo Qoondada Doorashooyinka.
Dastuurku kuma jirto meel uu ku kala soocay ama uu ugu kala eexday muwaadiniinta,
arrintaasna waxa u daliil ah ah qodobka 36-aad ee dastuurka Somaliland, farqadiisa 1-aad toos
oo u dhigan sidan:- “Xuquuqaha uu dastuurku siiyey muwaadiniinta, si isku mid ah ayey u
wadaagayaan ragga iyo haweenku, marka laga yimaado wixii ay shareecadu ka reebtay
(haweenka). Ma daliil intaa ka badan ayeynu u baahanaynaa? Maya, ayaan filayaa.
Haweenka ka qayb-galka siyaasadda waxa ka hortaagan caqabado badan oo ay ka mid yihiin
qaar dhaqan, qaa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale, sida uu sheegay garyaqaan Guuleed Axmed
Jaamac oo ah gudoomiyaha ururka xuquuqal iinsaanka. Sidoo kale garyaqaan Guuleed waxa uu
sheegay in loo baahan yahay wacyigalin badan maadaama oo ay jiraan sababo badan.
Xalka ugu haboon ee ay haweenku ku gaadhi karaan damacooda siyaasadeed ee ka qayb-
qaadashada doorashada goleyaasha wakiilada iyo degaanadu waa in ay xisbiyadu siiyaan qoondo
go’an oo ay ku yeeshaan kuraasta labadaas gole, maadaama oo goleyaashii sharci dajintu aanay
isku raacin in haweenka la siiyo qoondo u gaar ah.
Waxa ay is waydiintu tahay xisbiyada siyaasadu ma kaga dhabayn doonaan qoondada ay u
sheegeen in ay haweenka siin doonaan.
Waxa kale oo iyana su’aali ka taagan tahay qodobka qoondada haweenka ee ku jira xeerka
dooshada golaha wakiilada in ay meel marin doonaan iyo in kale, iyadoo ay xusid mudan tahay
in golaha guurtidu qoondada hore u diideen, iyagoo ku sababeeyay in ay sharcigu aanu ogolayn
in cid qoondo doorasho loo samameeyo.